चीन सरकारले दियो सिनोफार्मको खोपलाई अनुमति - Aarthiknews
सोमबार, २४ फागुन २०७७ Monday, 08 March, 2021
चीन सरकारले दियो सिनोफार्मको खोपलाई अनुमति
विहीबार, १६ पुस २०७७
बेइजिङ । चीन सरकारले सिनोफार्म कम्पनीद्वारा विकास गरिएको कोभिड–१९ विरुद्धको खोपलाई “सःशर्त” अनुमति दिएको छ । चिनियाँ कम्पनी सिनोफार्मका अनुसार यो खोपको प्रभावकारिता ७९ प्रतिशत छ ।
सिनोफार्मको खोपलाई अनुमति दिएसँगै एसियामा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभाव घटाउन यो खोप महत्वपूर्ण पाइला हुने चिनियाँ अधिकारीहरुले बताएका छन् । यसअघि नै सिनोफार्मद्वारा तयार पारिएको कोभिड विरुद्धको खोप आपतकालीन प्रयोग अन्तर्गत ४५ लाख चिनियाँ नागरिकलाई दिइसकिएको छ । खोप दिइएकाहरुमा खासगरी स्वास्थ्यकर्मी र विदेशमा काम गर्न जाने चिनियाँ नागरिक रहेका चिनियाँ स्वास्थ्य अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
बुधबार मात्र सिनोफार्मले आफूले विकास गरेको खोप ७९ दशमलब ३४ प्रतिशत सफल रहेको घोषणा गरेको थियो । पश्चिमा मुलुकका फर्मास्यूटिकल कम्पनीहरु फाइजर र मोडर्नाले विकास गरेका खोपहरु क्रमशः ९५ र ९४ प्रतिशत सफल रहेको दाबी गरिएको थियो ।
चिनियाँ स्वास्थ्य प्रशासनका उप आयुक्त चेन सिफीले संवाददाताहरुसँग कुरा गर्दै सिनोफार्मको खोपलाई “सःशर्त” अनुमति दिइएको जानकारी दिनुभयो । अब सिनोफार्मले यो खोपलाई बजारमा बिक्री गर्न पनि अनुमति पाएको छ । चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगका उपमन्त्री झेङ यिछिनले सिनोफार्मका खोपहरु वृद्धवृद्धा र अरु जोखिममा परेका नागरिकलाई निःशुल्क प्रदान गरिने जानकारी दिए ।
चीनका करिब १ अर्ब ३० करोड नागरिक सबैलाई खोप प्रदान गर्न अभूतपूर्व चुनौती छ । उपमन्त्री झेङले भने, “कोभिड–१९ बाट सुरक्षित रहन कूल जनसंख्याको ६० देखि ७० प्रतिशत व्यक्तिलाई खोप दिनुपर्ने हुन्छ, र हामी त्यसैको तयारीमा छौं ।” बेइजिङले यसै वर्षको हिउँदसम्ममा लाखौं व्यक्तिलाई खोप दिइसक्ने योजना बनाएको छ । एएफपी
दक्षिण कोरिया र अमेरिकाबीच सैनिक खर्चमा सहमति
चीनले रक्षा बजेट बढायो, भारतकोभन्दा ३ गुणा बढी
८ वर्षदेखिको कच्चा तेलको मूल्य, ७० डलर पुग्यो, अझै बढ्ने
इजरायलमा बन्द रेष्टुरेन्ट र बारहरू पुनः खोलिने
एलआइसीको आईपीओ निष्कासन पूर्व २५ हजार करोड चुक्तापुँजी बनाउने प्रस्ताव
महिला चेम्बर ट्रेड फेयर २०२१ शुरु
एमाले धुम्बाराहीमा माओवादी केन्द्र पेरिस डाँडैमा
चितवन कोल्ड स्टोरेज पुनः सञ्चालनमा
सन् २०३० सम्म जीडीपीमा उद्योगको योगदान २६ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य
प्रचण्ड र माधव नेपाल अलग भए !
संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमाको गृहकार्यमा सरकार
थपिए ८९ सङ्क्रमित, निको हुने दर ९८.६ प्रतिशत
समानतामा आधारित समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको आवश्यकताः राष्ट्रपति
झुक्याउन पैसा नभएको चेक काट्ने भावना श्रेष्ठ चण्डोलबाट पक्राउ
नाथमले खोल्यो टुरिष्ट गाइड तालिम, कति लाग्छ शुल्क ?
वैशाखदेखि उपत्यकाबासीको धारामा दिनहुँ पानी
नक्सालको फुड ट्रक रेस्टुरेन्टमा आगलागी
शिखर इन्स्योरेन्सको बुक क्लोज मंगलबार, आइतबारसम्म कायम शेयरधनीहरु मात्र योग्य
भैरहवा एयरपोर्टको दोस्रो ट्रर्मिनल भवन निर्माणमा आर्थिक चलखेल, ९ अर्ब लागतलाई बढाएर २१ अर्ब पुर्याइँदै
हुन्डाईका दुई नयाँ गाडी नेपाली बजारमा, यस्ता छन् विशेषता
शृंखला खतिवडा वर्ल्डलिंकको सद्भावनादूतमा नियुक्त